Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya oo mar labaad shir wadatashi ugu yeeray madaxda Dowlad Goboleedyada - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya oo mar labaad shir wadatashi ugu yeeray madaxda Dowlad Goboleedyada
October 28, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shir wadatashi ugu yeeray madaxda Dowlad Goboleedyada sii looga wada hadlo xal u helista khilaafka taagan.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ugu baaqay madaxda Dowlad Goboleedyada in iyaga oo eegaya danta dalka iyo dadka ay aqbalaan dalabka Dowladda Federaalka Soomaaliya si loo sii xoojiyo dadaallada lagu xaqiijinayo midnimada, wax wada qabsiga iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay xafiiska madaxtooyada Villa Soomaaliya xalay.
“Uma ogolaan karno kala aragti duwanaansho siyaasadeed darteed in gaabis ku yimaado guulihii sida adag aanu ku yagleelnay ee la xiriiray dib u dhiska dalka iyo hay’adaha dowliga ah. Wadahadal iyo midnimio dhab ah oo kelliya ayaa inoo sahli kara inaanu hore uga sii dhaqaaqno halka aan hadda taagannahay. Talo iyo cudud mid ah ayaanu uga adkaan karnaa kooxda arxan laaweyaasha ah ee Al-Shabaab si aanu u gaarsiino dadkeenna nabad, barwaaqo iyo horumar.” Ayuu ku yiri bayaanka.
Bishii September, madaxda sare ee Dowlad Goboleedyada Soomaaliya oo kala ah Puntland, Jubbaland, Galmudug, Hir-Shabeelle iyo Koonfur Galbeed oo magaalada Kismaayo shirk u yeeshay ayay ku hakiyeen wadashaqeynta Dowladda Dhexe, balse Hir-Shabeelle ayaa dib uga baxday mowqifkaas iyaga oo heshiis la gaaray Dowladda Federaalka.
Waa markii labaad oo Madaxweyne Farmaajo uu madaxda Dowlad Goboleedyada ugu yeero shir wadatashi tan iyo bishii September.
Garoowe-(Puntland Mirror) Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa qabsatay magaalada Af Urur maanta oo Jimce ah, sida ilo-wareedyo dhanka ammaanka ah ay u xaqiijiyeen warsidaha Puntland Mirror. Maleeshiyada ayaa magaalada gudaha u gashay kadib markii ay ciidamada Puntland [...]